Mpanamboatra sy mpamatsy famatsiana - Orinasa famatsiana ao Shina
3 G 5 g 10 g 100 g silika gel famolavolana granule mangarahara
Fiarovana avo ary tsy misy harafesina. Mety amin'ny fonosana tsy misy vovoka sy tsy static. Mihaona amin'ny mari-pahaizana miaramila mil-d-3464e amerikana ireo vokatra ireo, izay safidy mety indrindra amin'ny indostria semiconductor sy microelectronics. Azo namboarina mifanaraka amin'ny fangatahan'ny mpanjifa.
Sarimihetsika bubble mena antistatic bubble film ambongadiny ambongadiny sarimihetsika sarimihetsika varimbazaha mahatohitra foza orinasa mivantana ambongadiny
Ny kitapo bubble anti-static mifangaro noforonin'ny orinasanay dia mameno ny lesoka amin'ny kitapo fanoherana ny static (maro ny kitapo bubble anti-static tsy mifangaro, mora mivoaka rehefa ela, ary ny fampisehoana buffer absorption anti-static dia. mahantra). Ny vokatra dia misy firafitra roa sosona: sarimihetsika conductive PE ivelany, sandan'ny fanoherana ambonin'ny tany dia 108 ~ 1010'Ω ， Ny sosona anatiny an'ny kitapo bubble anti-static, ny lanjan'ny fanoherana amboniny dia 108 ~ 1010'Ω.
Lamba mena, Masinina saron-tarehy, Mpanamboatra sarontava, Lamba matevina manohitra ny statika, Masinina saron-tava iray Drag Drag, Kitapo bubble fonosana,